7 Toerana itiavana an'izao tontolo izao | Save A Train
Home > Fiaran-dalamby any Italia > 7 Toerana itiavana an'izao tontolo izao
Nandeha lamasinina, Train Travel Austria, Fiaran-dalamby Britain, Train Travel China, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby any Italia
(Last Nohavaozina: 07/06/2021)
Manomboka amin'ny trano mimanda any Eropa sy ireo tanàna taloha taloha ka hatrany Hong Kong, ireo 7 ny tanjon'ny fitiavana manerantany dia hampiakatra ny fitiavanao. Ireo 7 ny toerana itiavanao no toerana mety indrindra ho an'ny toko mahafinaritra amin'ny tantaram-pitiavanao, ary hamelomana indray ny majia.
1. Toerana fitiavana ny ankamaroan'ny tantaram-pitiavana manerantany: Paris
Raha mitady synonyma ao amin'ny diksionera ho an'ny "fitiavana" ianao, ho hitanao soratana amin'ny taratasy lehibe i Paris. Ny hatsarany tsy hay hazavaina, hatsaran-tarehy amin'ny alina, patisserie, ary teboka maro ho an'ny sary romantika, ataovy anisan'ny i Paris 7 toerana itiavan'izao tontolo izao.
Mandehandeha mamaky ny manodidina an'i La Marais mahafinaritra, mihaino mozika an-dalambe, na manao fitsangantsanganana amin'ireo toerana tsara tarehy indrindra, Paris no tandindon'ny fitiavana. Eny, mety tsy hahagaga raha Paris no tampony toeran-tantely any Eoropa, ary mety hieritreritra ianao fa hamandrika tanteraka ireo toerana romantika rehetra ao aminy. Na izany aza, ity tanàna mahafinaritra ity dia feno tasy, izay ahafahanao mikiakiaka ny fitiavanao, na manaova snap tsy misy fizahan-tany. Paris dia tsy isalasalana fa tanànan'ny fitiavana farany, ho an'ny mpivady rehetra, amin'ny loko rehetra amin'ny avana.
Ny zavatra romantika indrindra tokony hatao any Paris
Mandehandeha manodidina an'i Musee Carnavalet, oroka ao amin'ny Canal Saint-Martin, ary mankafy fitsangatsanganana am-pitiavana ao amin'ny habaka Champs de Mars malaza.
2. Ny toerana itiavana tsara indrindra any Italia: Venice
Raha i Venise dia iray amin'ireo tanàna mpizahatany indrindra any Eropa, hahita toerana miafina maro ianao, aiza no hizarana gelato na pizza. Ny tetezana ao an-tanàna dia hitondra anao sy ny malalanao ho any amin'ny zoron-dalana tsy voavono, lalan-kely, sy trano fisakafoanana eo an-toerana, any amin'izay mety ho laninao italiana nahandro, ary toast ho tia divay italiana na Aperol.
Ny andro tantaram-pitiavana tonga lafatra ao Venise dia hanomboka amin'ny fizahana ireo tetezana maro. dia, afaka mihinana pizza ianao 2 ary gelato. Manoro hevitra anao ny hamela ny fitsidihana ny 2 nosy mahaliana Burano sy Murano, mandritra ny tapany faharoa amin'ny andro, rehefa lasa ny mpizahatany maro. Atỳ, ho anao irery ny nosy, ho an'ny sary romantika.
Ny zavatra romantika indrindra tokony hatao any Venise
Mirenireny manodidina an'i Dorsoduro, faritra manodidina, na misakafo any Cantina Do Spade, izay toerana nisakafoanana hariva i Casanova. dia, azonao atao ny misakafo antoandro am-pitiavana ao amin'ny nosy Burano manaitra, ary mankafy mitaingina gondola amin'ny filentehan'ny masoandro. Azonao atao ny manomboka ny fialan-tsasatrao a dia lamasinina tantaram-pitiavana avy any Londres na Suisse ka hatrany Venise.
3. Toerana itiavana any Eropa: Lake Como
Milentika amin'ny Alpes ny masoandro, taratra ao anaty farihy, ary mandehandeha miaraka amin'i Beby malalanao ianao Ny dian'ny mpifankatia, ny lalan'ny mpifankatia any Varenna. Azo antoka fa hanaiky ianao fa izany no mahatonga Farihy Como toerana fitiavana tsy hay hadinoina ho fialantsasatra am-pitiavana ho an'ny 2.
Ho fanampin'ny tanàna mahafinaritra an'i Varenna, Bellagio, ary Vezio dia manolotra fomba fijery mahavariana momba ny farihin'i Como sy toerana romantika marobe.
Ny ankamaroan'ny zavatra romantika hatao any amin'ny farihy Como
Ankafizo ny fitsangatsanganana an-tampon'ny tantaram-pitiavana any an-tendrombohitra Lari hatrany amin'ny fitsangatsanganana majika any Monte Crocione. Raha mpivady adrenaline ianao, avy eo ny sidina amoron-dranomasina eo ambonin'ny farihy no hanaitra ireo lolo ireo!
4. Toerana itiavana any Sina: Hong Kong
Modern, Nahafinaritra ny, ary ny mahavariana, Hong Kong dia iray amin'ireo tanàna tantaram-pitiavana indrindra manerantany. Ny tranobokan'ny tanàna, sy nosy, manolora toerana fahitana mahavariana ho an'ny sary izay hisambotra ny fitiavanao. Hong Kong dia tsara tarehy amin'ny hazavan'ny andro sy amin'ny alina, filentehan'ny masoandro sy ny fiposahan'ny masoandro, manolotra hetsika tantaram-pitiavana maro, hoan'ny fialan-tsasatra miala sasatra ho an'ny roa, na zava-mahadomelina, mametraka azy eo ambony 7 toerana itiavan'izao tontolo izao.
Ny ankamaroan'ny zavatra romantika dia atao any Hong Kong
Ny andro tantaram-pitiavana tonga lafatra dia hanomboka amin'ny fitsangantsanganana manodidina ny Victoria Harbour, na fitsangantsanganana any amoron-dranomasina feno fasika any Repulse Bay. Ny folak'andro, afaka mandray kilasy fandrahoan-tena manokana ianao, ary farano amin'ny fananganana ny solomaso ho tianao amin'ny filentehan'ny masoandro.
5. Toerana itiavana ny fitiavana manerantany: Aotrisy
Aotrisy, ny tany trano mimanda, zaridaina mahafinaritra, ary tanàna mahasarika, dia toerana fitiavana any Eropa. Raha te handositra ny vahoaka ianao, avy eo Halstatt no toerana mety indrindra, ankoatry ny hafa fitsangatsanganana an-andro mahafinaritra avy any Wina.
Ny tahiry voajanahary mahavariana toa ny Innsbrucker dia manome ny fomba fijery mahafinaritra indrindra an'ireo tendrombohitra sy lohasaha Austrian, ho an'ny fitsangatsanganana am-pitiavana. Ankoatry ny, ireo tanàna taloha mahafatifaty izay toerana mety indrindra amin'ny tantaram-pitiavana angano mandrakizay mandrakizay. Na izany aza, raha tianao ny fialan-tsasatra an-tanàn-dehibe kokoa, avy eo Viena dia tonga lafatra tanteraka amin'ny faran'ny herinandro tantaram-pitiavana. Ary, Vienna dia iray amin'ny ny toerana itadiavana olona LGBT be indrindra manerantany, ka mandray tsara ny mpivady rehetra, amin'ny toe-javatra misy fifandraisana, ary miandry anao fotsiny sy ny iray hafa manan-danja.
Ny zavatra romantika indrindra tokony hatao any Austria
Andro iray tantaram-pitiavana any Aostralia dia hanomboka amin'ny strudel aostraliana hisakafo maraina ao amin'ny kafe iray eo an-toerana. dia, mivoaka mitsangatsangana any amin'ny zaridaina Australiana na trano mimanda. Ankoatry ny, raha mpivady fanatanjahan-tena ianao dia fitsangatsanganana an-tampon'ny Alpes Austria, dia ho tonga lafatra.
6. Toerana itiavana an'izao tontolo izao: Prague
Petit ary manintona, Prague dia tantaram-pitiavana mahatsiravina ary manana toerana mety amin'ny antsika 7 toerana itiavana indrindra eto amin'izao tontolo izao. Eny, tototry ny mpizahatany io, fa misy fomba fijery sy zaridaina maitso betsaka, hialana amin'ny vahoaka be mpandeha, ary mbola mankafy ny tsara indrindra tany Prague taloha.
Bara kely mahafatifaty, tetezana mahatalanjona, ary ny manodidina an'i Mala Strana no toerana mety indrindra amin'ny fitiavana. Raha i Prague dia iray amin'ireo toerana malaza indrindra any Eropa, misy toerana miafina be dia be; tanànan'ny Mala Strana mahafinaritra, ary mijanona miaraka amin'ny fahitana ny tanàna, Tetezana Palacky, dia a vitsivitsy amin'ireo tantaram-pitiavana miafina.
Ny zavatra romantika indrindra tokony hatao any Prague
Dia an-tongotra any Mala Strana, labiera amoron'ny renirano Vltava, sakafo hariva misy fahitana avy ao an-tanàna, sy ny cocktails ao amin'ny bara Hemingway.
7. Toerana itiavana an'izao tontolo izao: Ny distrikan'ny farihy any Angletera
Rehefa nanentana ny tononkalo tantaram-pitiavana nataon'i William Woodsworth ny toerana iray, avy eo dia toerana itiavana toerana ambony indrindra. Tokoa, ho hitanao fa ny tany Lake amin'ny West England dia tantaram-pitiavana be. Misaotra an'i 6 tahiry voajanahary ambanivohitra sy tontolo anglisy, ary 16 farihy mahatalanjona.
Any amin'ny faritr'i Cumbria, ny tanin'ny farihy dia iray amin'ireo faritra tsara tarehy indrindra any Angletera. Ary noho izany, mitsangatsangana eny amin'ny havoana, hatrany amin'ny farihy sy tarns, dia iray amin'ireo zavatra tantaram-pitiavana indrindra eto amin'izao tontolo izao. Hahatsapa ianao fa miditra amin'ny tantara majika Jane Austen, izay ny fitiavana manohitra ny sakana rehetra.
Ny toerana romantika indrindra any Cumbria
Farihin'i Keswick, ho an'ny fitsangatsanganana mahafinaritra mankany amin'ny pikinika akaikin'ny farihy. Ankoatry ny, Tampon'ny Helvellyn, ary ny riandrano dia toerana nofinofy tanteraka ho an'ny roa.
Ireo 7 ny toerana itiavana dia toerana mahafinaritra hahafinaritra ny fifandraisanareo. eto amin'ny Save A Train, ho faly izahay hanampy anao handamina ny fialan-tsasatrao am-pitiavana ho an'ireo tanjona fitiavana sy mampientam-po ireo.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “7 Toerana Fitiavana Manerantany” ve ianao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Flove-destinations-worldwide%2F- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
toerana fitiavana LoveDestinations romanticdestinations RomanticvacationEurope weddinginEurope